Posted by Taungoo at 9:35 PM
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ကို အခွင့်ရတိုင်း မလွတ်တမ်းကြည့်တဲ့သူပါ။ အရမ်းနှစ်သက်ပါတယ်။ဆိုတော့- သရုပ်ဆောင်လုပ်ဖူးသေးလား?
မြန်မာ ရုပ်ရှင်တော့ သိပ်မကြည့်ဖြစ်ဘူး။ ကြည့်ပြီးတဲ့ အထဲက ကြိုက်တာတွေ များတယ်။ ကြိုက်မယ် ထင်တာပဲ ကြည့်တာကိုး။ မြန်မာ ရုပ်ရှင်နဲ့ ပက်သတ်ပြီး မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။ Happy Birthday - BTW. :)
ရုပ်ရှင်သမိုင်းပြတိုက် ဆိုတာကို ရောက်ခဲ့ဖူးပေမယ့် သေချာတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။
ခုလို အမှတ်တရ ပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
ပြီးတော့ Happy Birthday :-)
ဗဟုသုတတွေ ဖြန့်ဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်--
ကိုယ့်နိုင်ငံရုပ်ရှင်အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို မှတ်တမ်းတွေသိရသာ ဗဟုသုတရပါတယ်ဗျာ...
သရုပ်ဆောင်တော့ လုပ်ဖူးသေးဘူးဗျ။ ကမ်းလှမ်းထားတဲ့သူတွေတော့...
ကြိုက်မယ်ထင်တာတွေပဲ ရွေးကြည့်တော့ အချိန်ကုန်လည်းသက်သာ စိတ်လည်းကျေနပ်တာပေါ့ အကိုရာ။
ဗဟုသုတရတယ်ဆိုလို့ ကျွန်တော့်ရည်ရွယ်ချက်လေး အထမြောက်သွားတာပေါ့ မမနိုးရယ်
ရုပ်ရှင်မင်းသားလုပ်ရင်တော့ မမမြတ်တို့က အားပေးဦးမှာပဲလားဗျ
ညီမကမှ ရောက်ဖူးသေးတယ်။ အကိုက အရမ်းသွားချင်ပေမယ့် အဖော်စပ်မရလို့ မရောက်သေးဘူး။
ကျွန်တော့်ကို ရုပ်ရှင်မင်းသားထင်တယ်တဲ့။ မမသက်သာ ကျွန်တော့်ကို မြင်ဖူးလိုက်ရင် ထင်တယ်တင်မကဘဲ ဟယ် ဟုတ်တယ်တော့ လို့တောင် ဖြစ်သွားဦးမယ်။း)
အစဉ်လာကြီးမားခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အကြောင်းကို အားလုံးသိစေချင်လို့ပါ ညီလေးရေ